XASAASI: Sacuudiga oo Somalia u Hanjabay (Xajka oo Xayiraad Laga saari doono somalia) | Xaqiiqonews
XASAASI: Sacuudiga oo Somalia u Hanjabay (Xajka oo Xayiraad Laga saari doono somalia)
Jariidada Lemond ee kasoo baxda dalka Faransiiska ayaa daabacday iyadoo ay si socoto isku day lagu balaarinayo go’doominta dalka Qatar, Sacuudiga ayaa bilaabay cadaadis xoogan uu saarayo tiro kamid ah dowladaha Africa si ay xiriirka ugu jiraan dowladda Qatar, waxyaabaha ay adeegsan doonto waxaa kamid ah adkeenta helitaanka Visaha gudashada Xajka.
Jariidada waxa ay leedahay Dowladda Sacuudiga ayaa qaadeyso laba talaabo oo kala ah in ay dowladaha aan wali Qatar xirirka u jarin ay kala noqoto taageradii Maaliyadeed ay siin jireen iyo hanjaabad ku aadan in aysan heli doonin dalka ku galka wadankaasi si shacabka wadamadasi uga qeyb qaataan munaasabaha Xajka ama Cumrada.
Wadamada badan ayaa u hogaansamay Cadaaadiska dowladda Sacuudiga balse waxaa jira wadamo Afrikaan ah oo ku adkeestay inay dhex dhexaadiyaan labada dal ee Sacuudiga iyo Qatar, waxaana kamid ah wadamadasi Soomaaliya, Sudan, Maroko, Aljeeriya iyo Tunisia.
Saraakiil muhiim ah ayaa laga soo xiganaya in Nidaamka Villa Somalia ay iska diideen 80 Million oo doolarka Mareykanka oo xirirka loogu jarayo Dowladda Qatar in kastoo saraakisha Madaxtooyada ayan ka hadlin arimahaasi waxana xusid mudan in ergay ka socda Boqorka Sacuudiga uu soo gaaray si lama filaan Soomaaliya balse uu ku hungoobay damaciisa.
Carada ay ka qaaden isbahaysiga Sacuudiga ee Xrirka u jaray Qarar go’aankii Soomaaliya waxa durba muujisatay dowladda Imaaradka oo dalkeedi kasoo ceyrisay Muwaadin Soomaali ah oo kamid ahaa tartamayasha tartan quraan aqris ah oo ka socday dalka Imaaradka.
Waxaanan la ogeyn sida ay dowladda Sacuudiga isku qabad siin doonto in siyaasadeedi ka dhanka ah Qatar ay uga faaideyso in mid kamid ah tiirarka islaamka ugu muhiimsan ee Xajka laga hoos istaago wadamo diiday in Sacuudiga u quduucan.